Maxaa laga bedalayaa amaanka dalka? – Hornafrik Media Network
Maxaa laga bedalayaa amaanka dalka?
By HornAfrik	 On Sep 4, 2018
HornAfrik-Kulanka todobaadlaha ah ee guddi hoosaadka amniga golaha wasiirrada oo uu shir guddoomiyay Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, dib-u-habaynta ciidanka iyo dardar-gelinta diiwaan-gelinta ciidamada.
Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen taliyaasha ciidamada ayaa sidoo kale looga hadlay dardar-gelinta diiwaan-gelinta ciidamada, gaar ahaan nidaamka casriga ah ee kaydinta xogta shakhsiga, si loo fududeeyo xuquuqdooda.
Kulanka ayaa lagu falanqeeyay qorshaha sugidda amniga iyo dib-u-dhiska garoonka ciyaaraha Muqdisho, waxaana taliska booliiska Soomaaliyeed uu soo bandhigay qorshe faah faahsan oo suura gelinaya in garoonka lagu ciyaaro, ammaankiisana la sugo.
Shirka Kismaayo oo dib u dhacay iyo Keatin oo ..
Soomaaliya oo ka faa’idaysanaysa Sanduuqa $60ka bilyan ee Shiinuhu u qoondeeyey Qaaradda Afrika.